डा. केसीसँगकाे वार्ता असफल – nepakhabar
डा. केसीसँगकाे वार्ता असफल
१० श्रावण २०७५, बिहीबार ०३:०२
काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राडा गोविन्द केसी पक्षले सरकारसँगको वार्ता तोडिएको घोषणा गरेको छ । डा. केसीको ज्यान जोखिममा पार्ने तथा स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका काममा हलो अड्काउने छलकपटपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै केसी पक्षधर टोलीले बुधबार वार्ता भंग भएको घोषणा गरेको हो ।
डा. केसीका वार्ताटोली संयोजक डा. अभिषेकराज सिंहले बुधबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरी आफूहरूले उपलब्ध गराएको सूचीबमोजिमको सुधारसहित विधेयक पारित गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता आएपछि मात्रै अर्को चरणको वार्तामा बस्ने अडान राखेका छन्। सरकार र केसी पक्षधर वार्ताटोलीबीच मंगलबार सात बुँदे सहमति भए पनि बुधबार एकाएक वार्ता भाँडिएको हो ।
सरकारी पक्षले नेपाली कांग्रेस र विवेकशील साझाको निर्देशनमा सहमतिमा पुगिसकेको वार्ता भाँड्ने काम भएको आरोप लगाएको छ । केसीको वार्ताटोलीमा रहेका दुई सदस्य सुरेन्द्र भण्डारी र ओमप्रकाश अर्याल विवेकशील साझाका नेता हुन् । केसी पक्षले एकलौटी रूपमा वार्ता भंग भएको बताए पनि सरकारी वार्ताटोलीले आफूहरू अझै जिम्मेवार ढंगले काम गरिरहेको बताएको छ।
सरकारी वार्ताटोलीका सदस्य डा. गुणराज लोहनीले भने सरसल्लाह गर्दै गर्ने र अर्को वार्ता जुनसुकै समयमा पनि बस्न सकिने जानकारी दिए । ‘उहाँहरूको मागको विषयमा नै छलफल भयो । विशेष ऐन, विधेयक र अब के गर्ने भन्ने विभिन्न विषयमा केन्द्रित छलफल भयो,’ डा. लोहनीले भने, ‘बुधबारै टुंग्याउने कुरा थियो तर टुंगिएन, वार्ता नटुंगिउन्जेल डा. केसीका पक्षबाट प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न मिल्छ ।
वार्ता टुंगो नलागुन्जेल दुई पक्ष हो, वार्ता टुंगो लागेपछि हामी एकै हौँ, एकै पक्ष हुन्छ ।’ केसीका तर्फबाट वार्ताटोलीमा रहेका अर्याल र भण्डारीले मंगलबारको सहमतिविपरीत ज्यान जोखिममा परेकाले मन्त्रिपरिषद्बाटै संसद्मा प्रस्तुत विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने संविधानविरोधी अडान तेस्र्याएपछि बुधबार वार्ता असफल भएको सरकारी टोलीको भनाइ छ । यता, केसी पक्षले भने वार्ता भंग भएको भन्दै उल्टै सरकारमाथि आरोप लगाएको छ ।
‘अलमलका कारण डा.केसीको स्वास्थ्यमा अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था आइसकेको छ । यो अवस्थामा थप अलमल गरेर डा. केसीको स्वास्थ्यलाई झनै जोखिममा पार्न हामी तयार छैनौँ,’ केसी वार्ताटोलीका संयोजक सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो संवेदनशील समयमा आएर छलकपटपूर्वक सत्याग्रही डा. केसीको ज्यान जोखिममा पार्ने तथा स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका काममा हलो अड्काउने सरकारको रबैयाको कडा विरोध गर्दछौँ ।’
सरकार दुईतिहाइ बहुमतको दम्भ देखाउने, असंवेदनशील रहेको र अमर्यादित ढंगले पेस भएकाले वार्ता असफल भएको डा. केसी पक्षका वार्ताटोली सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले बताए । ‘सरकारले वार्तामा बोलाउने र झुक्याउने मात्रै काम गर्यो,’ भण्डारीले भने, ‘हाम्रो तर्फबाट हुन सक्ने लचकता अपनायौँ, तर उहाँहरूले कुनै पनि विन्दुमा लचकता देखाउनुभएन । अब डा. केसीको अनशन कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो बोल्न सक्दैनौँ ।’
डा. केसीका माग पूरा गर्न दिउँसो साढे १ बजे शिक्षा मन्त्रालयमा वार्ता भएको थियो । उक्त वार्ताभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेता सुवास नेम्वाङ, डा. केदारभक्त माथेमा, डा. धर्मकान्त बास्कोटा र डा. दिव्यासिंह साहबीच बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । सो वार्तामा मंगलबार भएको सात बँुदे सहमतिको स्वागत गर्दै निचोडमा पुग्ने उपाय सुल्झाइएको थियो ।
तर, भण्डारी र अर्यालले बुधबार अघिल्लो दिनको सहमतिविपरीत संसद्मा संशोधन नभई मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । सो विषय संविधानविरोधी भएकाले सरकारी वार्ताटोलीले अस्वीकार गरेको थियो । वार्ता विफल भएसँगै डा. केसी जुनसुकै वेला अचेत हुनसक्ने भन्दै उनको रेखदेखमा खटिएका चिकित्सकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले डा. केसीको उपचार गर्न मेडिकल टिम नै बन्न नसकेको भन्दै स्वतःस्फूर्त रूपमा आवासीय चिकित्सक र केही शुभेच्छुक चिकित्सकले स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी लिँदै आइरहेको बताएका हुन् । उपचारमा संलग्न आवासीय चिकित्सकले आफूहरू ड्युटी समय मिलाउँदै उपचारमा संलग्न भइरहेको जानकारी गराए ।मेडिकल टिम बनाएर २४सै घण्टा डा. केसीको स्वास्थ्यस्थितिलाई निगरानी गर्नतर्फ कुनै पहल नगरेको भन्दै केसीनिकट विद्यार्थीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
जुम्लाबाट सुविधासम्पन्न अस्पतालमा लिएर आएको भनेर सरकार ढुक्क बसिरहेको आरोप उनीहरूको थियो । ‘रातमा त झन् कोही पनि हुँदैन,’ डा. केसीको साथमा रहँदै आएका सहयोगी किशोर केसीले भने । आवासीय चिकित्सकका अनुसार बुधबार १५औँ सत्याग्रहको २६औँ दिनमा आइपुग्दा केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बनेको छ । उनको सेतो रक्तकोषिका (डब्लुबिसी) को संख्या हालसम्मकै न्यून भएका उनीहरूको भनाइ छ ।
रगतमा सुगरको मात्रा अत्यन्त कम भएकाले जुनसुकै वेला डा. केसी अचेत अवस्थामा पुग्न सक्ने उनीहरूले बताए । ‘रगतमा पोटासियम अति नै कम भइसकेको र मुटुको चाल पनि अत्यन्त कम भइरहेकाले कुनै पनि वेला धड्कनमा समस्या आई मुटु नै बन्द हुनसक्ने अवस्था आउन सक्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । डा. लक्ष्मण भुसालले केसीले बिस्तारै होस गुमाउँदै गएको जानकारी दिए ।
‘मंगलबार मात्रै मैले आफैँ बसेर केसीको रगत जाँचको लागि पठाएको थिएँ, आज त्यही कुरा बिर्सिसक्नुभएको रहेछ,’ उनले भने, ‘केही दिन यही अवस्था रहिरहे दिमागमा गम्भीर असर पर्न गई अचेत हुने, छारे आउने र कोमामा जाने अवस्था पनि आउन सक्छ ।’ त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १५औँ अनशनमा रहेका डा. केसीको आज २७ दिन भएको छ । उनको यो सबैभन्दा लामो अनशन हो ।
कांग्रेस–विवेकशीलले भाँडे सहमति- राजन भट्टराई, नेता, नेकपा
गोविन्द केसीका प्रतिनिधि र सरकारी प्रतिनिधिबीचको वार्ता कांग्रेस र विवेकशील साझा पार्टीले भाँडेका छन् । हिजो केसी र सरकार पक्षबीच ७ बुँदे सहमति भएको थियो । हिजोको वार्तापछि कांग्रेस नेता गगन थापा, विवेकशील साझाका सुरेन्द्र भण्डारी र ओम अर्यालको होटेल क्रिस्टल थापाथलीमा बैठक बस्यो । सरकारसँग भएको सहमति नमान्ने निष्कर्ष उनीहरूले हिजै निकालेका थिए।
बुधबारको वार्तामा केसीका तर्फबाट आएका जीवन क्षत्री र अभिषेक सिंह लचिलो रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । तर, विवेकशील साझाका ओम अर्याल र सुरेन्द्र भण्डारीले भने हिजोको सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाका विषयमा विवाद झिके । सरकारका तर्फबाट ७ बुँदे सहमतिअनुरूप संसद्मा सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक संसद्मा गइसकेकाले सहमति अनुरूपको संशोधन गर्न लचकता प्रस्तुत गरिएको थियो ।
विधेयकमाथि संशोधन गर्ने क्रममा संशोधन प्रस्तावमार्फत केसीका माग अघि बढाउन साझा विवेकशीलका प्रतिनिधिहरू सहमत भएनन् । उनीहरूले संसद्को प्रक्रिया जेसुकै भए पनि सरकारले अहिले नै संसद्ले पास गर्ने दस्ताबेजमा सही गर्नुपर्ने जिद्दी गरे । संसद्लाई पनि डिक्टेट गर्नुपर्ने प्रस्ताव साझा विवेकशीलका तर्फबाट आएपछि वार्ता भाँडिएको हो ।
Total Share2FacebookFacebook1 TwitterTwitter1 Google plusGoogle plus0